कक्षा ११ मा तपाईंको कुन ग्रेड आयो? कति नम्बर आउँदा कुन ग्रेड? कुन ग्रेड आए ग्रेड वृद्धि मौका परीक्षामा सहभागी हुन पाउने? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
कक्षा ११ मा तपाईंको कुन ग्रेड आयो? कति नम्बर आउँदा कुन ग्रेड? कुन ग्रेड आए ग्रेड वृद्धि मौका परीक्षामा सहभागी हुन पाउने?
काठमाडौं – कक्षा ११ को नियमित तर्फको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शनिबार बेलुकी ग्रेडिङ प्रणालीमा नतिजा सार्वजनिक गरेको हो ।बोर्डले एसइइकै जस्तै नौ समूहमा विभाजन गरेर नतिजा सार्वजनिक गरेको छ।
बोर्डका अनुसार विद्यार्थीले आफ्नो सिम्बोल नम्बरबाट आफ्नो कुन विषयमा कुन ग्रेड आयो ? भन्ने मात्रै थाहा पाउने छन्।
११ को परीक्षामा विद्यार्थीको विषयगत रुपमा ग्रेड छुट्टयाइए पनि एकमुष्ट नतिजामा यस्तो ग्रेड दिइएको छैन । बोर्डले असार १ गतेदेखि परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो ।
गत असार पहिलो साता सम्पन्न भएको परीक्षामा तीन लाख ४७ हजार सात सय ४८ जना सहभागी थिए। परीक्षा सम्पन्न भएको सात महिनापछि नतिजा सार्वजनिक भएको हो।
मोबाईल म्यासेजवाट पनि यसरी रिजल्ट हेर्नुहोस्….
(1) Type NEB Symbol Number and send SMS to 31003.
(2) Type NEB Symbol Number and send SMS to 1601
(3) Type NEB Symbol Number and send SMS to 34949
(4) Type NEB Symbol Number and send SMS to 35001